Ufuna kubuyiselwe emphakathini uNtuli | Ilanga News
Home Izindaba Ufuna kubuyiselwe emphakathini uNtuli
Ufuna kubuyiselwe emphakathini uNtuli
Uthi uzoqhubeka nomkhankaso wokulwa nezingozi emgwaqweni
AKAZIMISELE ngokusebenza nosomabhizinisi abangabuyi-seli emphakathini uNgqo-ngqoshe wezokuThutha, ukuPhepha nokuXhumana koMphakathi KwaZulu-Natal, uMnu Bheki Ntuli, osanda kuqokwa kulesi sikhundla.
UMnu Ntuli unikwe lesi sikhundla emuva kokuba kususwe uMnu Mxolisi Kaunda wayotshalwa ekubeni yiMeya yeTheku.
Engxoxweni ekhethekile ne-LANGA, uMnu Ntuli uthe usezinhlelweni zokuhlangana nabo bonke osomabhizinisi abasebenza nomnyango wakhe ngenhloso yokubazisa ngezinhlelo
Uthi ayikho into emuma emphinjeni njengosoma-bhizinisi othola umsebenzi wezigidi enda-weni ethile kodwa angawenzeli lutho umphakathi wakuleyo ndawo.
“Uma uthola umsebenzi emnyangweni, kubalulekile ukuba ube nohlelo lokubuyisela emphakathini osebenza kuwona. Kungaba wukuthola umndeni odla imbuya ngothi noma izingane ezenza kahle ezifuna ukungena emkhakheni ohambisana nebhizinisi lakho, uziqhube bese uzinika amathuba,” kusho uMnu Ntuli.
Ungqongqoshe ubekhuluma naleli phephandaba emcimbini wokwethulwa ngokusemthethweni kwenyanga yezokuthutha eNingizimu Afrika, okunguMfumfu (October).
Uthi okuhle wukuthi akamusha eminyangweni ayiphethe njengoba ebengusihlalo wamakomidi ayengamele esiShayamthetho saKwaZulu-Natal, ngakho uzoqhubeka nazo izi-nhlelo ebesezikhona eziqhamuke noMnu Kaunda.
“Umnyango usazoqhubeka nokulwa nokubhoka kwezingozi emigwaqweni, kanti ngeke silwe nalokhu ngoba kuyinyanga yezokuthutha, kodwa sifuna kube wumkhankaso wemihla ngemihla ngaphandle kokukhetha isikhathi sonyaka. Ayikho ingozi kaKhisimusi nePhasika, ngakho kumele abantu baqikelele ngaso sonke isikhathi
sonyaka,” kusho yena.
UMnu Ntuli akayena umuntu okhonze ukungenzi lutho ngempilo yakhe njengoba ehlale ematasa ngaso sonke isikhathi.
Uthi kule nyanga uzokwehla enyuka evula amabhuloho ngokusemthethwe-ni bese ehambela nezivimbamgwaqo ezizobe zitshaliwe ezindaweni ezahlukene.
Mayelana nomunye umnyango awengamele, okungowezokuphepha, uthe uzoqinisekisa ukuthi kuyaliwa nobugebengu obubhekiswe kwabesifazane nezingane, futhi amaphoyisa aphuma inqina ukuthungatha abenzi bobubi.
Okunye akuchaze njengokuseqhulwini, wudaba lwezimoto ezebiwa bese ziweliswa imingcele.
Uthe sebeqalile ukuzivala ezinye izindlela ezisetshenziswayo ukuqhuba lobu bugebengu.
Kuzokhumbuleka ukuthi uMnu Ntuli ukhuluma ngobugebengu bezimoto ezebiwa ziweliswe imingcele nje, sekushintshane ongqongqoshe ababalelwa empameni le nkinga ibhekene nabantu baseMkhanyakude.
Izimoto ezinkulu ziyebiwa ziweliswe umngcele ohlukanisa iNingizimu Afrika neMozambique, emuva kwalokho kucwebe iziziba yize kuthiwa ezinye ziyabonakala kwelikaManukuza kaZikode (Mozambique) ziha-mba izikhulu zikahulumeni.
Ngaphandle kokuba ngusopolitiki onohlonze, uMnu Ntuli ungumuntu okhonze ukuphila impilo ejwayelekile futhi ozenzelayo izinto ngaphandle kokuthumela.
Uthi usanda kukhuzwa ngabaqaphi bakhe ngemuva kokuba bemthole eziyela esitolo ngaphandle kokubazisa.
“Ngibuye ngikhohlwe ukuthi sekumele kube nabantu engibatshelayo ngaphambi kokwenza izinto,” kusho uMnu Ntuli ehleka.
Uthi nakuba ezalelwe esithenjini kodwa akaziboni esithatha ngokwakhe. Ukhule engunozinti obebamba ngisho impukane ngenxa yekhono lakhe, kanti ungumla-ndeli wokuqina we-Orlando Pirates.
Previous articleUgonyuluka ngobunzima adlule kubo u-Unathi
Next articleBathi ‘bamiswa’ ngendlela engacacile kwaShembe